MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardDiscover MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPTမှ လေးစားတန်ဖိုးထားရပါသော သုံးစွဲသူမိဘပြည်သူများအတွက် Web Broswer များသာမက Android App နဲ့ပါ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Discover ဝန်ဆောင်မှုကို Facebook ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။
MPTမှပေးထားသော နေ့စဉ်20MB အခမဲ့ဒေတာဖြင့် Discover တွင် မိမိကြည့်ရှုလိုသော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များအား Android Applicationဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ မိုဘိုင်း Webဖြင့်ဖြစ်စေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သို့သော် Discover ကိုအသုံးပြုနေချိန် Video၊ အသံဖိုင်တွေနဲ့ အခြားသော ဒေတာအသုံးပြုမှုများတဲ့ Website တွေကိုတော့ အသုံးပြုလို့ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် MPT၏Discover အစီအစဉ်က အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် ဖုန်းဘေလ်မရှိတဲ့အချိန်မျိုးတွင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေစေနိုင်မယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ Covid-19 ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွင် MPT Discover နှင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Update သတင်းများအပြင် အခြားသော အင်တာနက် website တွေကို ဖုန်းဘေလ်အကုန်ခံစရာမလိုဘဲ သိရှိနိုင်ပါပြီ။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် Discover အား Free Modeဖြင့်အသုံးပြုရာတွင် ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို မြင်ရမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက Paid Modeသို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပြီး ဒေတာဖိုးအား
က။ ပတ်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါက ဝယ်ယူထားသောပတ်ကေ့ချ်ထဲမှ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး
ခ။ ပတ်ကေ့ချ်မဝယ်ယူထားပါက သုံးသလောက်ပေး ဒေတာနှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်နိုင်သည်။
Paid Modeသို့ပြောင်းလဲရာတွင် သုံးစွဲသူအနေဖြင့် မိမိနှင့်အဆင်ပြေသော ဒေတာပတ်ကေ့ချ်များကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“See photos” ကို နှိပ်ပါ။
ဒေတာဝယ်ယူရန် (သို့မဟုတ်) ရှိပြီးသား ဒေတာပတ်ကေ့ချ်ကို အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါ။
ဒေတာပတ်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူရန် အတည်ပြုပါ။
ဒေတာပတ်ကေ့ချ်ကို ဝယ်ယူပြီးကြောင်း အတည်ပြုခြင်း။
မိမိနှစ်သက်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပို့စ်များ၏ စာသားများကို MPT အင်တာနက်ဖြင့် 20MB အထိ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဒီ https://0.discoverapp.com/ လင့်ခ်လေးက တစ်ဆင့်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
Discover အတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိ (active) အခြေအနေတွင်မရှိသည့် သုံးစွဲသူများ၊ CDMA၊ WTTX နှင့် Roaming အသုံးပြုသူများသည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
Mobile web browser (Google Chrome/Firefox) မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ ။ Discover App ကို Discover Web ပေါ်တွင် အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
iOS အသုံးပြုသူများသည် Mobile web browser မှတစ်ဆင့်သာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပိုစ့်များ ဖတ်ရှုရန် တနေ့လျှင် 20MB Data ကို နေ့စဉ် ရရှိပါမည်။
ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကို အခပေးဖြင့်သာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါမည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို ဖုန်းဘေလက်ကျန် မရှိချိန်တွင်လည်း အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (ဖုန်း setting ထဲတွင် data ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်)။
Paid mode တွင် features များအားလုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရယူထားသော SWE/ Shal/ Shwe နှုန်းထားများအတိုင်း (သို့)၀ယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ် မှ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံများ နှင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက “Discover” တွင် ဒေတာပက်ကေချ့်များကို ဝယ်ယူ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေချ့် နှင့် “Discover” မှ ဝယ်ယူလိုက်သော ဒေတာပက်ကေချ့် တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်း နည်းသော ဒေတာပက်ကေချ့်မှ အရင်ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
၁။ Discover ဆိုတာဘာလဲ?
Discover ဆိုတာ MPT သုံးစွဲသူတွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ Mobile Webနဲ့ရော Android App နဲ့ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ MPT သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ Discover မှတစ်ဆင့် အလုပ်အကိုင်ရေးရာ၊ သတင်းအချက်အလက် စတဲ့ အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားပေါင်း များစွာကို လူသုံးများတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (websites) တွေ မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
၂။ Discover ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ (သို့မဟုတ်) MPT က Discover ကို ဘာကြောင့် မိတ်ဆက်တာလဲ။
Discover ဆိုတာကတော့ ယခုလက်ရှိတွင် MPT Network တစ်ခုတည်းတွင်သာ ရရှိ အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး MPT သုံးစွဲသူတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေသော အကြောင်းအရာများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အလုပ်အကိုင် အကြောင်းအရာများ၊ COVID 19 နှင့် ပက်သက်သော သတင်းများကို အခမဲ့ဒေတာပမာဏကို အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် အဆက်အသွယ် အမြဲရှိနေစေရန် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာအများကို လေ့လာဖတ်ရှုလိုသူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော Mobile Web (or) App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Discover ကို ဘယ်သူတွေ ရယူ အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူတိုင်း Discover ကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၄။ Discover ကို ဘယ်လို ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါမလဲ။
Mobile Web တွင် ရယူအသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် နှစ်သက်ရာ Mobile Browser တွင် url link (0.discoverapp.com) ကို ရိုက်နှိပ်၍ ဖြစ်စေ၊ Discover Mobile Web ထဲတွင် Download ပြုလုပ်၍ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၅။ Discover ကို Mobile Web ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ။ Discover ဝန်ဆောင်မှုကို Mobile Web ဖြင့်သာမက Discover Android Mobile App တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ iOS သုံးစွဲသူများအတွက်ကတော့ Mobile Web Browser ဖြင့်သာ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
6. How muc၆။ Discover ပေါ်တွင် ပိုစ့်များကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်(ဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယိုများ မပါ) နေ့စဉ် အခမဲ့ ဒေတာပမာဏ ဘယ်လောက် ရရှိမှာပါလဲ။h free data amount can I get to access the internet via the Discover?
Discover ပေါ်တွင် ပိုစ့်များ ဖတ်ရှုရန် (ဓာတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယိုများ မပါ) နေ့စဉ် 20MB ဒေတာ အခမဲ့ ရရှိမှာပါ။
၇။ Discover Mobile Web ထဲသို့ ဘယ်လို ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါမလဲ။
မည်သည့် Mobile Browser တွင် မဆို url link (0.discoverapp.com) ကို ရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Discover Mobile Web ထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Discover Mobile Web မှာ ဓာတ်ပုံ သို့ ဗီဒီယို များကို ကြည့်ရှုချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပြုလုပ်ရပါမလဲ။
Discover Mobile Web မှာ ဓာတ်ပုံ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယို များကို ကြည့်ရှုလိုပါက Free Mode မှ Paid Mode သို့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ (သို့) ဗီဒီယို ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် Main Balance (သို့မဟုတ်) ဝယ်ယူထားသော Package များမှ တစ်ဆင့် ဖြတ်တောက်သွားမှာပါ။
၁) “See Photos” ကို နှိပ်ပါ။
၂) Paid mode သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် အတည်ပြုစာ ပေါ်လာပါမည်။
၃) Paid Mode ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၉။ Discover Mobile Web ကို မည်သည့် Mobile Browser များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
Discover Mobile Web ကို Google Chrome, Firefox အစရှိသော Mobile Browsers များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေမရှိတဲ့ အချိန်မှာလည်း Discover Mobile Web ကို အသုံးပြုနိုင်မှာလား?
ဟုတ်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန်ငွေမရှိချိန်တွင်လည်း ပိုစ့်များကို ဖတ်ရှုရန် အခမဲ့ တစ်နေ့လျှင် 20MB အထိ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်း setting ထဲတွင် data ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
၁၁။ ဓာတ်ပုံ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက ဒေတာ အသုံးပြုခ ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေတာ အသုံးပြုခ ပေးဆောင်၍ ဓာတ်ပုံ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရပါမယ်။ စာများကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသောဒေတာ ပမာဏ(20) MB မကုန်မချင်း ဒေတာအသုံးပြုခ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
၁၂။ Discover App ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ Discover Mobile App ကို Discover Web ပေါ်တွင် အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါတယ်။
၁၃။ Discover App ကို ဘယ်လို ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါမလဲ။
Discover App ကို အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ် ရယူနိုင်ပါတယ်။ ၁) Discover ၏ url link မှ တဆင့် Discover Mobile Web သို့ ဝင်ရောက်ပြီး
Home Page အောက်ဆုံးတွင် ရှိသော “Download for free” ကို နှိပ်ပါ။
၂) Discover Android App ကို install ပြုလုပ်ပါ။
၃) Discover App ဖြင့် Discover Mobile Web ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၁၄။ Paid Mode မှ Free Mode သို့ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါမလဲ။
Discover Web ၏ အပေါ် ညာဘက်ထောင့်တွင် ရှိသော “Go To Free” ကို နှိပ်၍ Paid Mode မှ Free Mode သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁၅။ Go To Free mode လည်းပြောင်းထားပါတယ်။ အခမဲ့ 20 MB ဒေတာလည်း မကုန်သေးပါဘူး။ ဖုန်းဘေလ် (Main Balance) ထဲက ဖြတ်သွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲ?
Discover Mobile Web ကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် ဖုန်းထဲရှိနောက်ခံ Background app တွေနဲ့ update settings တွေကို ဖွင့်ထားခြင်းက ဖုန်းဘေလ် (Main Balance) ထဲမှ ကျသင့်နိုင်ပါတယ်။
၁၆။ 20 MB ကုန်ဆုံးသွားပါက အသိပေးအကြောင်းကြားမည့် စာတို ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံအတိုင်း အသိပေးအကြောင်းကြားစာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁။ 20 MB ကုန်ဆုံးပြီးဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုပါက အခပေးဒေတာဖြင့် ရယူကြည့်ရှုရန်
၂။ ရယူပြီးပါက paid mode သို့ ရောက်ရှိပါပြီ
၁၇။ Upsell ဆိုတာ ဘာလဲ။
Upsell ဆိုတာ MPT မှ Discover အသုံးပြုသူများအတွက် Feature တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ Discover အသုံးပြုစဉ် ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်လိုသည့်အခါ ဒေတာပက်ကေချ့်ဝယ်ယူပြီး ကြည့်ရှုနိင်မှာပါ။
၁၈။ ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒိယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါသည်။ Discover မှ ဒေတာပက်ကေချ့်ကို မည်သို့ဝယ်ယူနိုင်ပါမလဲ။
ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒိယိုများကို ကြည့်ရှုလိုပါက Discover မှ ဒေတာပက်ကေချ့်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (ဒေတာပက်ကေချ့် ပြောင်းလဲမှု ရှိနိုင်ပါသည်)
၂) Paid Data ဖြင့် အသုံးပြုရန် “Use Data” (သို့မဟုတ်) ဒေတာဝယ်ယူအသုံးပြုနိင်ရန် “Buy Data” ကို ရွေးချယ်ပါ။
၃) Data pack ကို ဝယ်ယူရန် အတည်ပြုပြီး ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၁၉။ အခမဲ 20MB ဒေတာ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများ ကြည့်ရှုလိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါမလဲ။
အခမဲ 20MB ဒေတာ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဓာတ်ပုံများ (သို့မဟုတ်) ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလိုပါက နည်းလမ်း (၂)မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၁) အခမဲ့ mode မှ အခပေး mode သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုများကို Main Balance (သို့မဟုတ်) ယခင်ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေချ့်မှ ဖြတ်တောက်ပါမည်။
၂) Discover မှ offer ပေးထားသော ဒေတာပက်ကေချ့်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုများကို ဝယ်ယူလိုက်သည့် ဒေတာပက်ကေချ့်မှ ဖြတ်တောက်ပါမည်။
၂၀။ ယခင် ဝယ်ယူထားသော Data Pack ရှိသော်လည်း “Discover” ပေါ်တွင် offer ပေးထားသော Data pack ကို ထပ်မံ ဝယ်ယူအသုံးပြုချင်ပါတယ်။ ဒေတာဖြတ်တောက်မှုမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲ။
ယခင် ဝယ်ယူထားသော Data Pack နှင့် “Discover” မှ Data pack တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် သက်တမ်းပိုနည်းသည့် ဒေတာပက်ကေချ့်မှ အရင် ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။